Caalamka, 01 January 2020
Waalid Soomaali ah oo loo maxkamadeynayo 'gudniinka' gabadhooda
Laba waalid oo Soomaali ah oo in muddo ah ku jiray xabsi ku yaalla magaalada Dublin ee dalka Ireland, ayaa maalintii Jimcihii maxkamad la soo taagay iyaga oo ku eedaysan inay gudeen gabadh yar oo 2 jir ah oo ay dhaleen.
Syria oo soo 'ridday gantaallo ay kusoo weerartay Israel'
Habka difaaca hawada ee Syria ayaa ka hor-tagay gantaallo ay kusoo weerartay Israel, islamarkaana soo riday mid ka mid ah oo ku dhacay duleedka magaalada Dimishiq, waxaa sidaas werisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Syria, Sana.
Ghani oo ku Guuleystay Doorashadii Afghanistan
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa u muuqda inuu ku guuleystay doorashadi madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii September, kaddib marki ay guddiga doorashada maanta ku dhawaaqeen natiijadi codbixinta.
Waddamada Islaamka oo ku Kulansan Malaysia
Dalal dhowr ah oo Sacuudigu uu ku jiro ayaanan ka qeyb galain shirka, iyada oo Sacuudigu uu sheegay in shirkaasi uu baal maray ururka dalalka Islamka ay ku bahoobeen ee IOC.
Diyaaradaha dagaalka Israel oo weeraray Gaza